Cristiano Ronaldo oo uu kasoo yeeray hadal aan ka farxin jamaahiirta kooxda Real Madrid, muxuuse yahay? | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Europe » Cristiano Ronaldo oo uu kasoo yeeray hadal aan ka farxin jamaahiirta kooxda Real Madrid, muxuuse yahay?
Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu diiday inuu meesha ka saaro inuu xagaagaan ka huleeli karo kooxdiisa Real Madrid.
Hadalkaan ayaa wuxuu kasoo yeerayaa Cristiano Ronaldo Isbuuc ka dib markii uu camaaliqada reer Spain ka caawiyey hanashada koobka UEFA Champions League iyadoo noqotay kooxdii ugu horreysay ee difaacatay koobka Champions League tan iyo markii magacaan loogu wanqalay.
Hogaamiyaha Real Madrid ayaana wuxuu daaha ka qaaday in kubadda cagta aysan ka jirin wax aan macquul aheyn marka laga hadlayo saadaasha mustaqbalka la xiriirta.
Ronaldo ayaa waxaa si joogto ah loola xiriirshaa saxiixiisa kooxaha Manchester United, PSG iyo kooxaha jeebka weyn ee ka dhisan dalka China, iyadoo xitaa ay wararku sheegayeen inay Los Blancos diyaar u tahay inay dhegeysato dalabyada u imaanaya xiddigeeda.
CR7 ayaa u sheegay shabakadda Deportes Cuatro markii wax laga weydiiyey haddii laga yaabo inuu xagaagaan ka tago Real Madrid: “Waa macquul sababtoo ah ma jiraan wax aan macquul ka aheyn kubadda cagta”.